Monday . 18 November . 2019
အိချောပို ချစ်သူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ
ဘော်ဒီကောက်ကြောင်း အမိုက်စားနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ မင်းသမီး အိချောပိုကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေ အဆက်မပြတ် ရိုက်ကူးနေရသလို ပရိသတ်အားပေးမှုကိုလည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပိုကတော့ လက်ရှိမှာလည်း ပရိသတ်တွေ အားလုံး စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ သူ့ရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်းကို ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပိုတယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးကိုတော့ အလင်းမြေ ပရိသတ်ကြီးလည်း စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အိချောပိုကတော့ ချစ်သူဖြစ်သူက မင်းသားလည်း မဟုတ်သလို မော်ဒယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ “ဒါကတော့ တဖြည်းဖြည်း သိလာမှာပေါ့နော်။ ပရိသတ်ကို ချပြသင့်တဲ့ အချိန်ကရင်တော့ ချပြမှာပါ။ လောလောဆယ်တော့ ဒီထဲက မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြောပြထားတဲ့ သဘောပေါ့နော်။
ကိုယ့်အချစ်ရေးကိုမှ ဘာကြောင့် စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လို့ ထင်လဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာတော့ “ဒါကတော့ သူများတွေလည်း ရည်းစားထားနေကြတာပဲလေ။ အရမ်းကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်ကြလို့ထင်ပါတယ်။ တယောက်ထဲကတော့ နေဦးမှာပေါ့။ အခုမှလည်း စူက အလုပ်တွေသေချာလုပ်နေတုန်းဆိုတော့ ဘဝလက်တွဲဖော်ဆိုတာက ပရိသတ်တွေကို သေချာပြီဆိုမှ ချပြတာ ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖုံးကွယ်ချင်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ လျိုချင်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ တခုခုမှားသွားရင် ပရိသတ် စိတ်မကောင်းသွားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာကို စိုးရိမ်တယ်။” ဆိုပြီး အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားသွား ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုလူမျိုးကို လက်တွဲဖော် အဖြစ်ရွေးချယ်မလဲဆိုတာကိုတော့ “အဓိက ကတော့ စူ ပြောဖူးသလို အလုပ်ကိုလည်း နားလည်ရမယ်။ ပြီးတော့ မိသားစုနဲ့လည်း စိတ်တူကိုယ်တူရှိရမယ်။ အဓိက က တယောက်နဲ့ တယောက် စိတ်တူကိုယ်တူ ရှိရမယ်။ အဲ့လိုမျိုးကိုပဲ ရွေးချယ်ဖြစ်မှာပါ
ပရိသတ်တွေကို ပြောချင်တဲ့စကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “စူ လက်ခံထားတဲ့ကားလေးတွေ ထူးခြားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို ပရိသတ်တွေကို ချပြဖို့ ရှိတယ်။ အဲ့ဒါလေးတွေကို လက်ခံထားတယ်။ ရိုက်ရက်ကို အတိအကျ သိရရင်တော့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောမှာပါ။” ဆိုပြီးတော့ ပြောကြားသွား ခဲ့ပါတယ်။
“G-string ဝတျရတာ ကွိုကျလို့ G-String အတှငျးခံဘဲ ဝတျတယျ”လို့အမြိုးသားထုကွီးကို အသိပေးလိုကျတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျော
မွနျမာပွညျက အမှုတျောတျောမြားမြားကို ဇာတျတညျပွီး ရုပျရှငျရိုကျမယျ့ ဇဏျခီ
မမွေငျ့မိုရျကိုအရူးအမူးခဈြလှနျးလို့ လကျကိုဓားနဲ့ခွဈပွီး နာမညျရေးပွခဲ့တဲ့ ပရိသတျတဈဦး
အဖွူရောငျ ဘီကနီ ဝတျစုံလေးနဲ့ ကမျးခွရေောကျပုံလေးတှေ ခပြွလိုကျတဲ့ သငျဇာဝငျ့ကြျော